मदनकृष्णले हाँसेर जिते - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
19th November । सोमवार, मंसिर ३, २०७५
१प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहाल बितेको आज वर्ष पुग्यो ! यस्ता छन् उनका केहि दुर्लभ तस्वीरहरु !
२मंसिर ३ गते, तपाइको राशिफल पढ्नुहाेस्
३सेफेरोभिचको ह्याट्रिकसंगै स्विजरल्याण्डले बेल्जियम माथि ५-२ को कम्ब्याक जित हात पार्यो !! बेल्जियम लिगबाट बाहिरियो
४बखतनै छक्क पर्ने जाेडी भेटीए पुर्वमा ॥ बखत भन्दा साना र प्रतिभा भन्दा ठूली अझै राेचक छ प्रेम कहानी (हेर्नुहोस भिडियो)
५क्रोसियाको अर्को अनिदो रात, विश्व कप देखि नेशन्स लिगसम्म इंगलैंडको बदला र रेलिगेसनमा स्पेनको साथ!!
६एका एक कहाँ हराईन चीनकी लोकप्रिय तथा धनी यी सुन्दरी अभिनेत्री ?
७श्रृंखला खतिवडा “मिस वर्ल्ड” को भोटिङमा सबैभन्दा अगाडी , यसरी गर्नुहोस् भोट !
८कस्तो कपालमा कुन तेल लगाउने ! कसरी प्रयोग गर्ने तेल ? (जान्नुहोस्)
मदनकृष्णले हाँसेर जिते
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, असार २७, २०७१
रोग लाग्यो भने धेरैको ले लुकाउने बानी हुन्छ । भन्नै पर्‍यो भने पनि बिरामीले आफ्नो समस्या आधामात्र भन्ने गर्छन् । अपहेलित हुने डरले परिवारका सदस्यलाई समेत खुलेर आफ्नो समस्या भन्दैनन् । जब रोगले थला पार्छ त्यसपछि उपचारका लागि अस्पताल जाने प्रवृत्तिले धेरैको जीवन जोखिममा पर्ने गरेको छ । यस्ता घटना नेपाली समाजका लागि नौला होइनन् । तर हास्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ अरुभन्दा पृथक र साहसिक रुपमा प्रस्तुत हुने कोशिस गरेका छन् ।
कलाकारिताको माध्यमबाट समाजमा विभिन्न विषयमा जनचेतना फैलाउन र नागरिकलाई सचेत गराउन सफल श्रेष्ठले आफ्नो जीवनमा आइपरेको दःखलाई डटेर समाना गरेका छन् । पार्किन्सबाट पीडितश्रेष्ठको नेपालमै शल्यक्रिया भएको छ । स्रोतले भन्यो,‘मन दह्रो बनाएर अगाडि नबढेको भए श्रेष्ठलाई यस्तो सफलता मिल्ने थिएन । उनले हाँसेरै रोगलाई जिते ।
जसमा नेपाली न्युरो सर्जनको हात महत्वपूर्ण छ ।’ आत्मविश्वासले मानिसलाई जटिल समस्याबाट मुक्ति दिन सक्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् कलाकार श्रेष्ठ । जीवनमा लामो समय कलाकारितामा बिताएका उनले भने,‘मलाई देखिएको समस्याको उपचार अत्यन्तै जटिल र महँगो मानिन्छ । तर यसमा चिकित्सक सफल भएका छन् । मलार्य खुसी लागेको छ ।’आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
एका एक कहाँ हराईन चीनकी लोकप्रिय तथा धनी यी सुन्दरी अभिनेत्री ?
छक्का पन्जा-३ ले अमेरिकामा बनायो यस्तो नयाँ रेकर्ड !
यी हुन सर्वाधिक कलेक्सन गरेका नेपाली फिल्महरु ,परेनन् अनमोल र प्रदिपको फिल्म !
रवीना टन्डन बिहेअगावै दुई बच्चाकी आमा थिइन् !
‘छक्का पञ्जा ३’ को २ हप्ते कलेक्सन सार्वजनिक ! कति कमायो त ‘छक्का पञ्जा ३’ ले ?
तनुश्रीले मलाई धेरै पटक बलात्कार गरिन्, तनुश्री केटी होइन केटा हो : राखी सावन्त